मृगौला जोगाउन चाहनु हुन्छ भने भुलेर पनि नखानुस् यी खानाकुरा - ज्ञानविज्ञान
मृगौला हाम्रो शरीरको निक्कै संवेदनशील अंग हो । बाच्नका लागी नभई नहुने चिज हो । यो अंगमा खरावी आयो भने ज्यान नै जाने खतरा पनि हुन्छ । कैयौं मानिसले किड्नी फेल अर्थात मृगौलाले काम गर्न छोडेर ज्यान गुमाउँछन् । यहाँ मृगौला स्वस्थ राख्न खानै पर्ने ७ खानाको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
यस्ता लक्षण देखिए मृगौलामा समस्या हुनसक्छ :
किन फेल हुन्छ मृगौला ?
मृगौला फेल हुनुलाई ‘एन्ड स्टेज रिनल डिजिज’ पनि भनिन्छ । डाक्टरका अनुसार मृगौला फेल हुनुको अर्थ दुबै मृगौलाले काम गर्न बन्द गरेको र अब डायलाइसिस वा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट बिना धेरै दिनसम्म बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन ।
कहिले हुन्छ मृगौला फेल ?
हाम्रो शरिरमा दुई मृगौला हुन्छ जसको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरेर टक्सिनलाई अलग्गाउनु हो । यी टक्सिन पछि पिसाबमार्फत बाहिर निस्कने गर्दछ । जब कुनै कारणले मृगौलाले रगत फिल्टर गर्न वा फोहोर सामग्रीलाई बाहिर निकाल्ने क्षमता समाप्त हुन्छ भने मृगौला फेल भएको बुझ्नुपर्छ ।
धेरै नुन खाँदा रक्तचाप बढ्छ । यसले मृगौलामाथि लोड बढ्ने गर्दछ र मृगौला फेल हुने गर्दछ ।
शरिरमा चिनीको मात्रा बढ्दा मृगौलामाथि फिल्टर गर्ने लोड बढ्ने गर्दछ जसका कारण मृगौला फेल हुनसक्छ ।
तनावका कारण पैदा हुने हार्मोनले मृगौलालाई नोक्सानी पुर्याउँछ । मृगौला फेल हुने सम्भावना बढ्ने गर्दछ ।
४. गतिहीन जीवनशैलीः
यसले शरिरमा टक्सिन बढ्ने गर्दछ । मृगौलाले यी टक्सिनलाई बाहिर निकाल्न पाउँदैन जसका कारण यो फेल हुनसक्छ ।
५. धुम्रपान र मध्यपानः
यसले शरिरमा टक्सिन बढाउने गर्दछ । मृगौलाले यी टक्सिनलाई फिल्टर गर्न पाउँदैन र फेल हुनसक्छ ।
मृगौला फेल भएका ५ लक्षणः
१. पिसाबमा समस्याः
धेरै पिसाब आउनु, पिसाब फेर्न समस्या हुनु, पोल्ने, फिँजयुक्त पिसाब र पिसाबमा रगत देखिनेजस्ता लक्षण हुनसक्छन् ।
टक्सिन फिल्टर नहुँदा पानी जम्मा हुने भएकाले शरिर सुन्निने गर्दछ जसलाई एडिमा भनिन्छ ।
३. छाला रोगः
रगतमा यूरियाको स्तर बढ्दा छाला रोग, मुख गन्हाउने, बान्ता होला जस्तो अनुभव हुनेजस्ता समस्या निम्तिन सक्छ ।
४. जोर्नी दुखाईः
शरिरमा टक्सिन बढ्दा हड्डी र जोर्नीमा दुखाई हुनसक्छ । थकान र कमजोरी पनि हुनसक्छ ।
मृगौला खराबीका कारण रगतमा अक्सिजनको संचार राम्रोसँग हुन पाउँदैन । यसले कमजोरी पनि निम्त्याउन सक्छ ।
मृगौला फेल हुनबाट बच्ने ५ टिप्सः
Don't Miss it स्वस्थ शरीर हुन रगत सफा हुनुपर्दछ, कसरी सफा गर्ने त रगत ? जान्नुहोस्
Up Next प्राकृतिक चिकित्सा के हो ? यस्ता छन् उपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा विधी